Special Marketing Fireside Chat – Kaplan Myanmar University College
Special Marketing Fireside Chat
” Fireside Chat အထူးစကားဝိုငျး ”
Fireside Chat ပှဲတှလေုပျလာတာလညျး အခုဆိုရငျ ၇ပှဲမွောကျကို ရောကျလာပါပွီ
Fireside Chat ဆိုတာကတော့ အနောကျနိုငျငံတှမှော အရမျးခတျေစားတဲ့ မီးလငျးဖိုလေးဘေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး လှတျလှတျလပျလပျအကွောငျးအရာ တဈခုအပျေါမှာ သခြောဆှေးနှေးတိုငျပငျကွတဲ့ ပှဲလေးမြိုးပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ မီးလငျးဖိုမရှိပမေဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ယဉျကြေးမှုတဈခုကို Kaplan Myanmar မှယူဆောငျလာတာဖွဈပါတယျ။
Kaplan Myanmar မှာ ဦးစီးပွီးလုပျနတေဲ့ Fireside Chat ပှဲလေးတှမှောတော့ Marketing, Finance, HR, Entrepreneurship ဆိုပွီး ခေါငျးစဉျတှနေဲ့ လုပျပါတယျ။
ဒီပှဲလေးကို ဘာလို့ Special Marketing Fireside Chat ပေးထားတာလဲဆိုတော့ စကာင်္ပူမှာ အရမျးနာမညျကွီးတဲ့ Kaplan Singapore ရဲ့ Marketing & Communication Director ဖွဈတဲ့ အပွငျ Digital Marketing ကိုလညျးအားထားလုပျကိုငျလကျြရှိတဲ့ Mr. Yu Hung နဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး Digital Marketer တှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ Ko Alex Khine နဲ့ တှဆေုံကွပွီး နှဈနိုငျငံ Marketing Field နှငျ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျ ဆှေးနှေးသှားမှာပဲဖွဈလို့ပါ။ နိုငျငံခွားသားနှငျ့ ဆှေးနှေးရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ English လိုပွောမှာဖွဈပမေဲ့ Simple sentence တှကေို ဖွညျးဖွညျးပဲပွောဆိုပေးဖို့ အကူညီတောငျးခံထားပါတယျ။
Marketing Field ကိုစိတျဝငျစားသူတှေ Marketing Field ထဲမှာ လုပျကိုငျလကျြရှိတဲ့သူတှအေနနေဲ့ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ပှဲလေးပဲဖွဈပါတယျ။
Mr. Yu Hung: Biography
He has more than 20 years of experience in Marketing – especially digital – having worked for leading brands across the education, financial services (Visa Inc.), travel and hospitality (Singapore Airlines, Pan Pacific Hotels Group), healthcare (Johnson & Johnson Vision Care) and retail sectors (Al-Futtaim Group), in roles supporting Singapore and the Asia Pacific region.
Yu Hung is business-focused, insights-led and outcomes-driven, and believes in putting audiences at the center of mobile-first user experience.
Mr. Alex Khine: Biography
Alex isaresult-based practitioner who has been hustling in the Marketing field since 2011. Alex took part as Marketing Associate in KFC Myanmar founding members back in 2015 focusing on Digital aspect and in Samsung Myanmar asaDigital marketing manager solely responsible for 360′ digital marketing until Feb 2019. And Alex was alsoafounding member of The Pink Sun Content Marketing Agency and wasaformer CEO. Now he is working asafreelance digital marketing consultant for all sizes of businesses.
Alex is also one ofafounder ofacommunity called Myanmar Bloggers Community, to connect Brands, Agencies, and Bloggers (Influencers) to get more awareness of Myanmar Bloggers to the World.
” Fireside Chat အထူးစကားဝိုင်း ”
Fireside Chat ပွဲတွေလုပ်လာတာလည်း အခုဆိုရင် ၇ပွဲမြောက်ကို ရောက်လာပါပြီ
Fireside Chat ဆိုတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အရမ်းခေတ်စားတဲ့ မီးလင်းဖိုလေးဘေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်အကြောင်းအရာ တစ်ခုအပေါ်မှာ သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့ ပွဲလေးမျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မီးလင်းဖိုမရှိပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို Kaplan Myanmar မှယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Kaplan Myanmar မှာ ဦးစီးပြီးလုပ်နေတဲ့ Fireside Chat ပွဲလေးတွေမှာတော့ Marketing, Finance, HR, Entrepreneurship ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ပါတယ်။
ဒီပွဲလေးကို ဘာလို့ Special Marketing Fireside Chat ပေးထားတာလဲဆိုတော့ စကာင်္ပူမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ Kaplan Singapore ရဲ့ Marketing & Communication Director ဖြစ်တဲ့ အပြင် Digital Marketing ကိုလည်းအားထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ Mr. Yu Hung နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Digital Marketer တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ko Alex Khine နဲ့ တွေဆုံကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ Marketing Field နှင့် ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ပါ။ နိုင်ငံခြားသားနှင့် ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် English လိုပြောမှာဖြစ်ပေမဲ့ Simple sentence တွေကို ဖြည်းဖြည်းပဲပြောဆိုပေးဖို့ အကူညီတောင်းခံထားပါတယ်။
Marketing Field ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေ Marketing Field ထဲမှာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kaplan Myanmar University College A/6, Waggi Yeik Thar Street, Kamayut Township., Yangon, 11041